TANA DESIGN WEEK: Mampiranty ireo fomba fiaina malagasy amin’ny vanim-potoana ankehitriny | Journal Madagascar
Ahoana ny fomba fisakafoanana maha malagasy amin’ny vanim-potoana ankehitriny? Ahoana ny fomba fakàna aina, ny fomba fipetratrapetrahana amin’ny vanim-potoana ankehitriny? Ho voavaly mandritra ny Tana Design Week ireo fanontaniana ireo. Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny 11 martsa 2022 teny amin’ny Gare Soarano ity hetsika andiany voalohany manome lanja ny mpanao ny asa tanana malagasy sy ny asa tanana ity ary tsy hifarana raha tsy ny 19 martsa 2022. “Designers” avy eto Madagasikara sy avy any ivelany miisa fito (07) no mampiranty ny sangan’asany mandritra ny Tana Design Week.
Asa tanana, ilaina ao an-trano sy eny an-tokontany, mirakitra kolontsaina malagasy saingy namboarina hifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny no harantin’izy ireo. Santionany amin’izany ny seza miendrika sahafa miaraka amin’ny jiro, asa famoronana nataon’i Richianny Ratovo. “Andao ny anaran’ny collection nataoko ity. Andao hiaraka aminay hivorivory. Hiresaka angano. Andao hiaraka aminay haniditsidina. Izay mahatonga an’ilay jiro ahitana endrika volana, masoandro”, hoy Richianny Ratovo manazava ny Nambarany fa mpanao sary ny tenany ary nandranto fianarana momba ny “designer”. “Izaho no namorona ny sary fa ny dadako no niketrika tamin’ny fanamboarana ity seza ity. Manana orinasa tantanam-pianakaviana izahay”. Olona 12 no niara-nisalahy tamin’ny famolavolana ny seza. Vy sy hoditra ny akora nanamboarana azy. Roa (02) herinandro kosa no fotoana lany tamin’izany.
Ankoatra ny fampirantiana dia hisy ny loabary an-dasy hiresahana lohahevitra isan-karazany manodidina ny “design”, ny asan’ny “designer” sy ny hifandraisan’izany amin’ny kolotsaina sy ny asa tanana. “Tsy varotra fampirantiana ny Tana design Week fa fanomezana hasina ny mpanao asa tanana malagasy sy ny asa tanana malagasy”, hoy i Domi Sanji, mpikarakara ny Tana Design Week. Nambaran’ity “Designer multidisciplinaire” ity fa “tsy ahita vidin’entana” ny mpitsidika fa ireo dingana rehetra nanaovana ilay asa tanana toy ny fotoana lany, ny isan’ny olona nanao azy, ny akora nampiasaina no aseho eny an-toerana. “Mila ovaina ny fomba fijery amin’ny asa tanana malagasy toy ny hoe lafo be fa aleo mividy vokatra hafa kanefa misy amin’ireny mora simba. Miova ny fomba fijery rehefa fantatra fa ny antony maha lafo azy toy ny fotoana lany…”, hoy izy. Araka ny fanazavany hatrany dia dingana iray mialoha ny fanamboarana asa tanana ny “design”. “Mila mianatra vao tonga designer. Tsy talenta ny “designer” hoy izy satria mila mahay manadihady ara-tantara ny fitaovana izay ho foronina”. Tsy voatery ho “designer “ ny mpanao asa tanana. Mifameno, afaka miara-miasa kosa anefa ny “designer” sy ny mpanao asa tanana. Raha fanadihadiana natao dia efa misy amin’ireo oniversite eto Madagasikara no mampiofana momba ny asan’ny “designer”.
Tags: designdesignerDomi SanjiRichianny RatovoTANA DESIGN WEEK
ORANGE DIGITAL CENTER DE MADAGASCAR : L’ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous
ANDRO MANERANTANY HO AN’NY ZON’NY MPANJIFA : Haka ny hevitry ny mpanjifa any amin’ny faritra ny RNDC